Maxaa kasoo baxay kulankii xalay ee madaxda dowlad goboleedyada iyo qodob lagu heshiiyey – Xorriya Online
Madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federalka ah ee Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay yeeshay kulan dhanka telaafanka ka dib dadaallo ay waday maalmihii lasoo dhaafay beesha Caalamka oo ku aadana khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynayaasha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyadoo diirada lagu saaray sidii dalka ay uga dhici laheyd doorasho lagu wada qanacsan yahay.
Mudadii uu socdey kulanka u dhexeeyey madaxda dowlad goboleedyada ayaa si weyn loo gorfeeyey xaaladda gobolka Gedo, muranka ka taagan Guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay iyo sidii horay loogu dhaqaajin lahaa doorashooyinka dalka.
Ilo xogagaal ah ayaa xaqiijiyey in madaxweynayaashu ay isaga soo dhowaadeen sidii hore isla markaana ay isla qaateen in laysugu yimaado kulan deg deg ah oo lagu xallinayo doorashada madaxweynaha iyo barlamaanka Jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya.
Kulankan ayaa imaanaya xilli shalay wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan uu kulamo xasaasi ah la yeeshay madaxda dowlad goboleedyada cadaadisna ku saaray inay dedejiyaan go’aamada heshiiska looga gaarayo madaxda dowlad goboleedyada.